muslims ( allah's fuckers) are destroying the world , please be solidarity Myanmar to fight against this dogs (Muslims) till the end of the world.
Wira Thu shared Wira Thu's photo.
"အိမ်ရှင်ဘာသာဝင်တို့နှင့် တည့်အောင်နေဖို့လိုကြောင်း သီတဂူဆရာတော်ကြီးက ဘာသာဝင်အားလုံးတို့အား သတိပေးဆုံးမ"
ယနေ့နိုင်ငံရဲ့ အစိတ်ပိုင်းတစ်နေရာမှာ အသေးအမွှားကိစ္စလေးကနေ ဘာသာရေး မငြိမ်သက်မှုတွေ အထိ ရောထွေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ ထိုအဖြစ်က ရပ်တန့်ဖို့နှင့် မငြိမ်သက်မှုကြောင့် ထိခိုက်နစ်နာသူတွေ၊ အကြမ်း ပတမ်းတွေ မဖြစ်ရလေအောင် သီတဂူဆရာတော်ကြီးက ဘာသာဝင်အားလုံးတို့အား သတိပေးဆုံးမထားသည်။ ဘာသာဝင်အားလုံး သိသင့်သည့် လိုက်နာသင့်သည့် ဒီဗွီဘီက အသံဖိုင်အား စာအဖြစ် မျှဝေလိုက်ပါသည်။
ဧည့်သည်ဘာသာဝင်တွေ ကိုယ်၊ နှုတ်၊ စိတ်သုံးပါး မငြိမ်းချမ်းသမျှ ကာလပတ်လုံး နိုင်ငံတော်ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဘယ်တော့မှ မရနိုင်ဘူး။ ဒီမြန်မာမြေပေါ်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာရောက်တာ နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ (နှစ်ထောင်)ရှိပြီ။ အဲဒီဘာသာတွေရောက်လာတာ နှစ်ထောင်ဂဏန်းမရှိသေးဘူး။ ရာဂဏန်းပိုင်းပဲ ရှိသေးတယ်။ ဧည့်သည်အဖြစ်နဲ့ ရောက်လာကြတဲ့ ဘာသာဝင်တွေဟာ အိမ်သည်နဲ့ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ချစ်ချစ်ခင်ခင် တည့်အောင် နေဖို့ကောင်းတယ်။
ဘာသာတရားတိုင်း သစ္စာတရားနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဖြစ်ပြီးတော့ တစ်ခါ "ဒီဘာသာတရားတွေကို တည်ထောင်ခဲ့တယ်။ God-တို့၊ အမ်လာတို့၊ ရဟူးတို့၊ မြဟ္မာတို့ ဗိရှနိုးတို့၊ ရှီဝတို့၊ ဒိုဘက်ကပြောရင် ဗုဒ္ဓတို့ သူတို့တတွေဟာ သစ္စာတရားနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ပေါ်လာတာပဲ"လို့ အကုန်လုံး တစ်ကမ္ဘာလုံးက ပညာရှိတိုင်းက ယုံကြည်လက်ခံထားကြတယ်။ အဲဒါကို ယုံကြည်လက်ခံထားသည့် အားလျော်စွာ ဒီဘာသာတရားတွေကို ကိုးကွယ်ကြတဲ့ ဒီလူတွေဟာ သစ္စာတရားနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို အကုန်လုံး ဝိုင်းဝန်း တည်ဆောက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်သင့်တယ်။ သစ္စာတရားကို ဖောက်ဖျက်ပြီးတော့ အမှန်တရားကို ဖယ်ရှား၊ မတရားတွေ၊ အဓမ္မဝါဒတွေ၊ အဓမ္မကျင့်သုံးမှုတွေကို ကျင့်သုံးပြီးတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို နှောင့်ယှက်ကြမည် ဆိုရင်တော့ ဘယ်ဘာသာဝင်ကိုမဆို ဘယ်ဘုရားကမှ ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။
မြန်မာ့မြေက ဘာသာဝင်တွေ အိမ်ရှင်ဘာသာနဲ့ ချစ်ချစ်ခင်ခင် နေဖို့လို၊ အဲဒါကြောင့် "နှစ်ပေါင်းရာဂဏန်းလောက်သာ ရှိသေးတဲ့ မြန်မာ့မြေပေါ်ကို ရောက်လာကြတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေဟာ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ပြေပြေပြစ်ပြစ်၊ ချစ်ချစ်ခင်ခင် ဗုဒ္ဓဘာသာတွေနဲ့ နေဖို့ကောင်းတယ်။" ဗုဒ္ဓဘာသာတွေက ဒီနိုင်ငံမှာ နှစ်ပေါင်း နှစ်ထောင်ကျော်ပြီ၊ သူတို့တစ်တွေက ရာလောက်ပဲရှိသေးတယ်။ အဲဒါကြောင့် အိမ်သည်တွေနဲ့ ဧည့်သည်တွေဟာ ချစ်ချစ်ခင်ခင်၊ ညီညီညွတ်ညွတ် ရှိဖို့ကောင်းတယ်။
ဒို့နိုင်ငံတော်မှာ မင်းအဆက်ဆက်၊ ပုဂံခေတ်ပဲစကြည့်၊ ရခိုင်ရာဇဝင်တွေမှာပဲ ဖတ်ကြည့်၊ ဗဒူမင်းညိုတို့ ဘာတို့ဆိုတဲ့ စာဆိုတော်တွေဟာ ရခိုင်ရာဇဝင်မှာရှိတယ်။ ဗဒူမင်းညိုဆိုတာ အဗ္ဗဒူမင်းညိုပဲကွ အဲဒီတော့ ဗမာ့နန်းတွင်းမှာ စနစ်တကျပဲ။ အမရပူရမှာကြည့်လိုက်ရင် အမရပူရမြို့တော်ဝန်ဟာ မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင် တွေ ဖြစ်ဖူးတယ်။ အဲဒါမြန်မာ့မင်းတွေက ဒီလိုနေရာတွေမှာ သေသေချာချာ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ကောင်းကောင်း မွန်မွန် ချစ်ချစ်ခင်ခင်ပေးထားပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် အိမ်ရှင်နဲ့ဧည့်သည်ဟာ အိမ်ရှင်ကလည်း အိမ်ရှင်ဝတ်နဲ့ ကျေကျေပွန်ပွန် ဧည့်သည်တွေ ကလည်း အိမ်ရှင်ရဲ့ အိမ်ပေါ်မှာ အိမ်ရှင်ကို ဒုက္ခမပေးနဲ့။ အိမ်ရှင်ကို ပြစ်မှားစော်ကားခြင်း၊ အိမ်ရှင်ကို ရိုက်ပြီးတော့ လုဖို့မကြိုးစားကြဖို့ အဲဒါ အလေးအနက် တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
အားလုံးမေတ္တာ၊ ကရုဏာ၊ ဘုရားသခင်တို့ရဲ့ မေတ္တာကရုဏာ၊ ပညာအရိပ်အောက်မှာ အားလုံးဂရုဏာနဲ့တူသော လရောင်ခြည်အောက်မှာ၊ ပညာနဲ့တူတဲ့ နေရောင်ခြည်အောက်မှာ အားလုံးအမြင် ရှင်းလင်းပြီး အေးအေးချမ်းချမ်း နေထိုင်စေချင်ပါတယ်။
(မတ်လ(၂၁)ရက်၊ ၂၀၁၃-တွင် ဒီဗွီဘီမှာ ပြောသောသီတဂူဆရာတော်ကြီး၏ ငြိမ်းချမ်းရေး ဓမ္မအသံဖိုင်မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။)
On Tue, Mar 26, 2013 at 6:17 PM, diamond.heart1 <diamond.heart1@gmail.com> wrote:
Use your head, buddha told legendary bullshits stories, all the buddhist believe them. Think about it first, before you write bullshits hate-speeches.